Fambolena fambolena elektrôlôjia fanamainana fanodinana dome China Manufacturer
Description:Plant Seeding Tray,Fitaovam-pitomboan'ny fananganana kitay,Electric Heating Kit ho an'ny fambolena
Home > Products > Seeding Heater System > Seeding Heat Mat > Fambolena fambolena elektrôlôjia fanamainana fanodinana dome
Manomboha aloha ny tsimok'aretinao ary manapaka amin'ny saha misy anao amin'ny ririnina amin'ny fampiasana fitaovana fanadiovana elektrika . Izy io dia natao manokana mba hambolena ny zana-kazo ao an-trano. Ny dongy plastika mazava tsara dia manampy amin'ny fijerena ny fivoaran'ny zana-kazo. 2 ny lavaka fantsakana ao amin'ny trano maizim-pito dia manampy ny fikorontanan'ny taovam-pisefoanana. Azo atao ny mamboly voninkazo, voankazo ary legioma amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, na dia amin'ny ririnina aza. Fikarakarana plastika (ny fototra dia vita amin'ny ABS, ny kôlô dia vita amin'ny PET mazava, ny fanaka fanaka dia vita amin'ny PS)
Plant Seeding Tray Fitaovam-pitomboan'ny fananganana kitay Electric Heating Kit ho an'ny fambolena Rice Seeding Tray Plant Seeding Heating Mat Plastics Seedling Plant Seed Heat Mat Ceram Plant Tray